The Gardener: အောက်တိုဘာ ဓားကိုးလက်………………….၊ မျှော်လင့်ခြင်းဖြတ်ဓားသွားများ …….နှင့်ကျွန်တော်
အောက်တိုဘာ ဓားကိုးလက်………………….၊ မျှော်လင့်ခြင်းဖြတ်ဓားသွားများ …….နှင့်ကျွန်တော်
မနက်ခင်းဖျော့ဖျော့ ...ကောက်ကွေးပျော့ကျနေတဲ့ ကမ္ဘာမှာ ကျွန်တော်နိုးလာတယ်။ ဒါလီ့ကို သတိရတယ် .....။ သူ့နာရီပျော့ကြီးကို လိုက်ရှာရင်း စိတ်ဓာတ်တွေပျော့ကျသွားတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက် ...... ကောင်းကင်ကနေ အပ်အစား ကြက်ခြေခတ်တစ်ခုပြုတ်ကျလာတယ်။ .......။ မရည်ရွယ်ပါဘဲလျက် နှလုံးခုန်သံမှာ သွားစွပ်နေတယ် .....။ ကြက်ခြေခတ်ပြထားတဲ့ နှလုံးခုန်သံ ......။ အဲဒါဟာ ဆေးရုံတစ်ရုံရဲ့ အသက်ရှူအားကူပစ္စည်းဖြစ်တယ် .....။ လောကကြီးကို မေ့လျော့ထားသူတစ်ယောက် ဖွဖွကလေး မေ့မျောနေတယ် ......။ ရှူး ... တိုးတိုး ... ခင်များတို့ အသက်ပြင်းပြင်းမရှူနဲ့ ................ သူဆက်အိပ်နေပါစေလေ .........................။
မွန်းတည့်နေအောက်မှာ အရိပ်ဟာ ခြေထောက်အောက်မှာရှိတယ် ...။ အရိပ်ကိုနင်းပြီးရပ်တယ်။ အရိပ်နဲ့အတူတကွယှဉ်သန်တယ်။ အရိပ်ဟာ နောက်ဘက်ကို တဖြည်းဖြည်းရွေ့တယ် .....။ နာကျင်နေတဲ့နာရီတွေ ...မယွန်းနိုင်တဲ့ဂေါရာ .......... ထွန်ရေးပြင်နေတဲ့ ကံကြမ္မာနဲ့ တစ်ဖက်တည်းတီးတဲ့ လက်ခုပ်သံများစွာ .............။ ရှေ့နှစ်ဘူတာမှာ ဂိတ်ဆုံးသွားတော့မယ့်ရထားတစ်စင်းရဲ့ဥသြသံကရော နာကျင်ဆွေးမြေ့နေမလား .......... ကျွန်တော့်နားထဲမှာတော့ ဓမ္မတေးတွေ လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးမြည်နေနှင့်ပြီ ........................။
ငယ်တုန်းက စောင်တဘက်နဲ့ကျောပိုးသွားလေ့ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးနဲ့ကျွန်တော်ဟာ သားအမိတော်စပ်ကြတယ်။ ဘာမဆို အလိုလိုက်တဲ့သူ့အတွက် အတွက် ခပ်ဆိုးဆိုးသားတစ်ယောက် လက်ခံရရှိသွားတယ်။ ဖြစ်ပြီးရင်ပျက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျိန်းသေပေါက်လောကကြီးမှာ အမေက သားကိုချစ်တာရဲ့တစ်ဝက်လောက်တော့ သားကလည်း အမေ့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်။ လောကဓံနဲ့ဓာတ်လှေကား တူတာက ကျဉ်းကျဉ်းကြပ်ကြပ်သွားလာရပြီး တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်လား မေမေ။ (မေမေပြုံးနေခဲ့တယ်။ ..............)
ကျွန်တော်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ပါတယ်။ ရေပွက်ပမာ ဖြစ်တယ်။ .....မြသန်းတင့်ဘာသာပြန်တယ်။ ( Simone de Beauvoir ရဲ့ A very Easy Death )။ စာအုပ်ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်နာကျင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နာကျင်ပါတယ်။ တစ်ခဲနက် တစ်စုတစ်ဝေးထဲ နာကျင်ပါတယ် .............။ စိတ်အစုအဝေးပြိုကွဲမှုအားဖြင့်နာကျင်ပါတယ်။ တစ်စစ်စစ်နာကျင်ပါတယ်။ တဖျစ်ဖျစ်လောင်ကျွမ်းသလိုနာကျင်ပါတယ်။ အကြားအလပ်မရှိဆင်းရဲသော နာကျင်မှုမျိုးဖြင့်နာကျင်ပါတယ်။ စာအုပ်ထဲကနေကျွန်တော်ပြန်မထွက်ချင်သေးဘူး .............။ ကျွန်တော် နာကျင်ပါတယ်။ စာအုပ်ထဲကထွက်လိုက်ရင် ဒီထက် နာကျင်ရတော့မှာလား ........။ ကျွန်တော်နာကျင်ပါတယ်။
နေ ဆိုတဲ့ အလတ်စားကြယ်တစ်စင်းဟာကျွန်တော်နဲ့ မိုင်ပေါင်း ၉၃သန်းကွာဝေးခဲ့ရာက တစ်ရွေ့ရွေ့နီးကပ်လာတယ်။ နောက်ဆုံး နေလုံးပျောက်ချိန်မှာ နေ၀င်တဲ့အရပ်ဟာလည်း ကြက်ခြေခတ်ဆောင်းထားတဲ့ နှလုံးသားပဲဖြစ်တယ်။ အသက်ရှူရခက်ခဲလာတယ်။ ပူပြင်းလောင်မြိုက်နေတဲ့ပရိဒေ၀ဟာ ဥပါယာသ အဖြစ်ကို တရွေ့ရွေ့ အသွင်ပြောင်းလာတယ် ………….။
ကျွန်တော် …. အမေနဲ့အတူ Crown of Thorns (မြန်မာအခေါ် kiss-me-quick) အပင်စိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ အမေနဲ့အတူ ပန်းပွင့်လာမယ့် အပင်လေးတွေကို စောင့်ကြည့်ပါတယ် ………။
သစ်ပင်စိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ အရိပ်အကဲနားလည်ဖို့မခက်ပါဘူးမေမေ …………..။ နာဖျားနေတဲ့ဂီတသံက ကောင်းကင်မှာ လက်ခနဲကြွေဆင်းမှုတွေနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးပါပဲအမေ ……….။ ဖိတ်ခေါ်မထားဘဲ အလည်လာတဲ့ ဇီဇ၀ါပန်းရနံ့လေးတွေနဲ့ ညဉ့်ဘက်မှာ အစာရှာတဲ့ ငှက်ကလေးတွေရဲ့ မြည်သံတွေဟာ ဆောင်းရာသီတစ်ခုလုံးကို ပိုက်ကွန်ထူထူနဲ့ဖမ်းမိထားသလို ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားနေတယ်မေမေ ……..။ အလံကိုနှုတ်ပြီးဆိုတော့မယ့် အောင်ပွဲခံတေးတွေ တပ်ဆုတ်သွားခဲ့ပုံက ပုံပျက်ပန်းပျက်ပါပဲမေမေ …….။ စစ်ရှုံးခရာဟာ အားအနည်းဆုံးသူတွေရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်သက်နဲ့မှုတ်လိုက်တာတောင် ကြေကွဲခြင်းတွေ ပီပီသသမြည်နေတယ်မေမေ။
အောက်တိုဘာ ၁၁။ ကျွန်တော်တိမ်မူးခဲ့သော လရောင်များ ယိုစီးကျနေသော ညခင်း ……. လရောင်ပျော့တွဲကျဆင်းနေတဲ့ ခရေပင် အရိပ်အောက်မှာ နာရီပေါင်းများစွာထိုင်နေမိတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မငိုကြွေးခဲ့တဲ့အတွက် လောလောဆယ်ဘယ်လိုငိုရမလဲမေ့နေတယ်။ လရောင်အသေတွေ၊ ကြယ်အသေတွေ၊ အရိပ်ထဲမှာ စိတ်အသေနဲ့ထိုင်နေမိတယ်။ မြင်မြင်သမျှဟာ အသေပဲ၊ ကစားကွင်းအသေထဲမှာ … သံတန်းအသေတွေ …. အကြည့်အသေတွေမြင်သမျှဟာ အသေတွေပဲ ….. သွေးရူးသွေးတန်း ထိုးဟောင်းလိုက်တဲ့ ခွေးဟောင်သံကလည်း အသေ၊ ရပ်တန့်နေတဲ့ကားအသေတွေကို ကွေ့ပတ်သွားနေတဲ့ သစ်ရွက်ကြွေတွေဟာလည်းအသေ။ မေမေ … မျှော်လင့်ချက်တွေ သေသွားတဲ့အခါ …. လူဆိုတာ အခွံသက်သက်မှန်းသေချာသွားတဲ့ အသေကောင်တစ်ကောင်ပါပဲမေမေ။
လေပြည်တွေက ကျွန်တော့်ကို ကွေ့ရှောင်တိုက်ခတ်သွားတယ်။ ညဉ့်ငှက်တွေလည်း ခပ်လှမ်းလှမ်းကပဲ အော်မြည်နေတယ်။ ……… မေမေ ……… တိုးတိုးဖွဖွလေး ရေရွတ်လိုက်ရုံနဲ့ …….. သောကတွေဘောင်ဘင်ခတ်တယ်မေမေ …………………..။
အနှေးပြကွက်တွေလို ကျွန်တော့်ငယ်ဘ၀ဟာ စိတ်အသေတွေကနေထွက်ကျလာတယ်။ …… ၂၅ နှစ်တိတိ ….အမေ့အနားမှာကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်။ ….. အမေကလည်း ကျွန်တော့်နားမှာရှိခဲ့တယ်။ ………
သက်တစ်ရာတမ်းမှာနေရတာကိုမေ့တယ်။ လူတွေရဲ့ပျမ်းမျှသက်တမ်းကိုမေ့တယ်။ မရဏနုဿတိကိုမေ့တယ်။ လောကပါလတရားကိုမေ့တယ်။ အိမ်ပြန်ချိန်ကိုမေ့တယ်။ ဒါပေမယ့် …. အမေ့အပြုံးတွေကိုတော့မမေ့ခဲ့ပါဘူး။ …
ဘာတစ်ခုမှမလိုချင်တော့တဲ့အခါမှာ လူတွေဟာ ဘာကို ဆုတောင်းကြမလဲမေမေ ….။ မဖြစ်နိုင်တာတွေကို လုံလုံလောက်လောက်သိနေရတဲ့အခါ ဖြစ်ချင်တာတွေကို ခေါင်းတစ်ချက်ယမ်းပြလိုက်ရတာပဲမဟုတ်လားမေမေ။
…. နေပါစေတော့ …… ဘ၀မှာ ဘာမှထပ်မလိုတော့ဘူး
…….. ကောင်းကင်အသေထဲက ထွက်ကျလာတဲ့ ကိုယ့်ကြယ်အကြွေလေးကိုပဲ ပြန်ုပြီးကောက်ယူခဲ့ရတယ်။ …………………..
မနက်ဖြန် ……..မနက်ဖြန် ……….မနက်ဖြန် ………မနက်ဖြန် …………………. လူတိုင်းမှာငြင်းလို့မရတဲ့မနက်ဖြန်တွေရှိတယ်မေမေ ………………………….။
ကျွန်တော်တို့တွေ အတူရယ်ခဲ့ကြဖူးမယ်။ အတူငိုခဲ့ကြဖူးမယ်။ အတူစိုက်ပျိုးခဲ့သမျှ အတူရိတ်သိမ်းခဲ့ဖူးမယ်။ …… တစ်ချို့လမ်းတွေက သိပ်ကျဉ်းတယ် ………….။ သားအမိတွေတောင် …. အတူလျှောက်လို့မရဘူး …..တစ်ယောက်စီ သွား …………ကြ ………….ရ ……………တယ် ……….။
အသက်ရှူအားကူပစ္စည်းတွေရပ်လိုက်တဲ့အခါ အသက်ဆက်မရှူတော့တဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ သေဆုံးနေနှင့်ပြီလားမေမေ ……………………။ …. ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်းနယ်နိမိတ်လေးက သိပ်ကို ပါးလျလွန်းပါတယ် ……….။
အဲဒီ စက္ကန့်လေးတစ်ခုရဲ့နောက်မှာ …. ဒီဘ၀ ကျွန်တော်တို့သားအမိ ပြန်မတွေ့နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကို လက်မခံချင်ပေမယ့် ……… နာနာကျင်ကျင် ………….လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။
May Peace Be Upon You, Mom ………
Your lovingly son,
(My mom was passed away on 12th of October 2008, and this post is dedicated to her.)
Thanks Mom and sis for your encouragements.
အောက်တိုဘာ ဓားကိုးလက်………………….၊ မျှော်လင့်ခြင်းဖြတ်...
Zephyr's ဖြတ်ထုံး ဆက်ထုံးများ